Iwo Matanho mana Ekushandisa Kana Kuchenesa CRM Dhata Kuti Uwedzere Kuita Kwako Kutengesa | Martech Zone
Makambani anoshuvira kuvandudza mashandiro avo ekutengesa anowanzo dyara mukuita zano revatengi hukama manejimendi (CRM) chikuva. Takakurukura kuti sei makambani shandisa CRM, uye makambani anowanzo tora danho… asi shanduko dzinowanzo kundikana nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Data -Dzimwe nguva, makambani anongosarudza kurasira data maakaundi avo uye vanobatika muCRM papuratifomu uye iyo data haina. chena. Kana ivo vatove neCRM yaitwa, vanogona zvakare kuwana iyo data ichishungurudza uye isingakwanise kuburitsa kudzoka pakudyara (Royi).
urongwa -Kuti kutengesa kukwidziridze CRM, panofanirwa kuve nemaitiro anotyaira hunhu hwekutungamira pamwe nekukosha kweakaundi azvino. Makambani anofanirwa kuve nemaitiro ekuisa pamberi uye maakaundi ane mukana wakanyanya.
Basa -Nzvimbo mitsva uye maakaundi aripo anofanirwa kupihwa nemazvo neCRM, ingave pamaoko kana kuburikidza nemitemo yedunhu. Pasina kugoverwa, hapana nzira yekufambisa basa rekutengesa.
Reporting -Kutaura kwakaringana, kwakajeka, uye kunotendwa kunofanirwa kuitwa kuti timu yako yekutengesa itore nyore kushandisa CRM pamwe nechikwata chako chehutungamiriri.
Kudzokorora -Iyo otomatiki, yekubatanidza, uye manyorerwo ekugadzirisa maitiro eCRM yako anofanirwa kuitwa kuchengetedza kurongeka kwedata uye kunyatsoona kudzoka kwako pakudyara. Pasina kugadzirisa CRM, reps vanosiya chikuva uye hutungamiriri hunotadza kutsamira pairi.
Nhanho 1: Kugadzirira Kana Kuchenesa Yako CRM Data
Dhata reakaundi rinogona kunge riri mukati meCRM yako yazvino, CRM yauri kutama kubva, yekubhadhara system kunze kwenyika, kana kunyange boka remaspredishiti. Chero nzira, isu tinowanzo kuwana toni ye data yakaipa inoda kucheneswa. Izvi zvinosanganisira asi hazvina kuganhurirwa kumaakaundi akafa, mafota asisipo, kutora, duplicate maakaundi, uye asina kurongeka maakaundi (mubereki/mwana).
Matanho anogona kutorwa kuongorora uye kugadzirisa data rako anosanganisira:
Kugutsikana -Kushandisa wechitatu-bato kuchenesa data maturusi pakambani firmagraphic data pamwe nedata rekuonana kusimbisa, kuchenesa, uye kugadzirisa data rako razvino. Izvi zvinova nechokwadi chekuti timu yako nematanho anogona kutarisa paruzivo rwakakwana kwete kufamba nedata rakashata muCRM.
chinzvimbo -Kuona mamiriro azvino emaakaundi, chiitiko, mari inosanganisirwa, yakapihwa mutengesi, nhanho yemutengi, uye kuonana idanho rakakura mukuparadzanisa marekodhi ayo CRM yako inofanirwa kutariswa pane kuunza toni yekusangana uye account data isingaite.
Vatungamiriri -Maakaundi anowanzo kuve nehumambo hwakabatana navo. Ingave mubatanidzwa une mahofisi akazvimirira, imba ine vatengi vakawanda, kana
Prioritization -Kutumira kunze mari yekutengeserana yakabatana nemaakaundi ako inzira yakanaka yekugovera recency, frequency, uye mari (RFM) metrics yekuisa pamberi zvichibva pane hunhu hwekutenga. Iyi nzira haiwanzo kuverengerwa muCRM yakakosha uye kazhinji inoda chishandiso chekunze chekuongorora nekukora.
Territory -Vatengesi vako vanopihwa sei kuaccount? Makambani anowanzo aine maindasitiri, matunhu, kana kunyange basa rinoenderana nehukuru hwekambani kubatanidza vamiriri vepamusoro vekutengesa kune yakakodzera account. Sezvo iwe uchipinza CRM yako pakuita kana kushanda kuti uchenese account yako iripo, iwe unozoda kuona kuti iyi yekugoverwa inoongororwa kuitira kuti mikana irege kuoneka.
Dzimwe nguva, makambani atakashanda nawo akatoganhurira maakaundi nevatengesi vavanoshanda navo neCRM yavo. Kuitwa kwakavakirwa pamaakaundi akakosha, semuenzaniso, kunogona kutyaira toni yebhizinesi pane kuyedza kuenderera kusangano rese. Izvi zvinogona kupa nyaya yekudzidza zvimwe zvikwata zvinoda kuona kukosha kweCRM yako.
Vashandi vako vanogona kazhinji kuona kubuda kwako… zvikwata zvekushambadzira uye zvekutengesa zviri tekinoroji-savvy zvinowanzo fambisa kushandiswa uye nekukurumidza ROI yeCRM yaunotumira pachinzvimbo chevashandi vasina basa.
Nhanho 2: Kuvaka Kubatanidzwa Kwako kuCRM
A CRM isina kubatanidzwa inoisa huremu hwakati wandei uye mutoro pavashandi vako kubata nekugadzirisa. Haisi chinhu chinodiwa kubatanidza CRM yako, asi zvinokurudzirwa kuti uongorore masisitimu ako uye uone kuti ndeapi magonero aunawo ekusimudzira yako CRM data.
Inotungamira - ese ekupinda mapoinzi ekutungamira anofanirwa kubatanidzwa muCRM yako pamwe chete nedata rese rinodiwa uye inonongedza sosi kubva masvika sei.
Enhancement - chero yechitatu-bato mapuratifomu ekusimudzira iyo account data neiyo firmagraphic uye yekuonana-level ruzivo runogona kubatsira hunhu hwako uye maitiro ekutengesa.
Touchpoints - chero nzvimbo dzekubata dzauinadzo dzinobatsira murwendo rwemutengi. Izvi zvinogona kuve kushanya kwesaiti, masisitimu ekufona, email kushambadzira, makotesheni masisitimu, uye masisitimu ekubhadharisa.
Chiitiko chakakosha kukwirisa maitiro ako ekutengesa mukati meCRM uye, kazhinji, nyore kusanganisa kunorasika izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kushambadzira kwako nezvikwata zvekutengesa kuti uvandudze mashandiro. A kuwanikwa kwedata inzira yakanaka yekunyora uye kuona mikana yekugadzira otomatiki yako kusanganisa uye chero otomatiki yekuwiriranisa masisitimu neCRM yako.
Nhanho 3: Kuita Yako Yekutengesa Strategy neCRM
Iye zvino zvawave nedata rakanakisa, nhanho inotevera kunzwisisa rwendo rwemutengi wako kuitira kuti iwe ugone nemazvo:
Sarudza kuti chii a marketing qualified lead (MQL) ndiko kugovera mutungamiri kune mumiririri wekutengesa.
Sarudza kuti chii a mutengesi anokwanisa kutungamira (SQL) ndiko kuziva mutungamiri, zvechokwadi, mutengi akakodzera kutevera.
Gadzira yako yekutanga maitiro ekutengesa kuona matanho anogona kuitwa nemutengesi wako kuti afambise mberi kune mukana. Izvi zvinogona kungova kufona kwekutanga kugovera zvigadzirwa zvako kana masevhisi kana kuratidzwa kwechigadzirwa chako. Iyi inzira inofanirwa kugara ichigadziriswa nekufamba kwenguva.
Isa yako matanho ekutengesa fanera kumaakaundi ako aripo uye upe matanho ekuita kuti vamiriri vako vekutengesa vabatane netarisiro yako.
Ita shuwa kuti une a kutengesa funnel dashboard iyo inopa zvese zvekuona uye nzwisiso mushumo mumaakaundi ako.
Ita shuwa kuti une a performance dashboard iyo inopa zvese zvekuona uye nzwisiso mushumo mune zvevamiriri vevatengesi 'basa kuti iwe ugone kudzidzisa nekuvapa zano.
Ichi chikamu chinotanga kuitwa kwemaitiro ako matsva ekutengesa uye zvakakosha kuti urikubatanidzwa nechikwata chako kuti uone chero nyaya dzasara dziri kugadzira zvipingaidzo mukubudirira kwavo mukushandisa CRM kukoshesa uye nekumhanyisa basa ravo rekutengesa. Panguva ino, kuvaka maitiro uye maitiro ekushandisa CRM akakosha.
Makambani mazhinji akamisa CRM yavo, vane nzira dzekutengesa uye kudzidziswa munzvimbo kuitira kuti vanhu vazive zvavanotarisirwa kuita muCRM kubata mikana yavo nemazvo. Dambudziko randinoona kazhinji nderekuti vanhu havangoite zvavanofanira kuita uye vakadzidziswa kuita. Chirongwa chedu chinogona kutyaira uye kuyera kutevedzera kune aya maitiro. Mune mamwe mazwi, kugona kubata mukana kuburikidza nematanho akasiyana-siyana ekutengesa kwekambani maitiro aripo, zvisinei, vashandisi nemaneja vanosarudza (zvakananga kana zvisina kunanga) kusazvidavirira ivo kana vashandi vavo nekuda kwekupinza ruzivo muhurongwa se. mukana unofambira mberi nenguva uye inowirirana.
Nhanho 4: Kutariswa Kwekuita uye Kudzidzisa
Kuitwa kwakajairika kwekambani yedu kubatsira vatengi (kunyanya Salesforce) mukuwana kudzoka pakudyara kwavo tekinoroji kunotanga neNhanho 1 kusvika 3… isu:
Tungamira kurovera pasi - Isu tinoshandisa manyorerwo kana otomatiki maitiro anobatanidza RFM mune yavo yese kutungamira maitiro kubatsira boka rekutengesa kuti ritarise kutarisisa kwaro pane yavo mikuru yekutora uye upsell mikana.
Sales Representative Performance -Isu tinopa vatengi vedu nezvese kushuma kwekuita uye kusimudzira kwehunyanzvi kutyaira kuita pamunhu uye nechikwata.
Sales Leadership Development -Isu tinopa vatengi vedu vatengesi vekutengesa nekuzivisa uye nehunyanzvi kusimudzira kufambisa kuita kwevamiriri vevatengesi vavo nezvikwata.
Organizational Reporting -Isu tinovandudza kushuma kune vatungamiriri vakuru mukati mesangano (kunze kwekutengesa uye kushambadzira) kuti tinzwisise kuita kwazvino pamwe nekufanotaura kukura kweramangwana.
Kune makambani anokwanisa kuchinjika uye kuita izvi ivo pachavo, asi zvinowanzoda wechitatu kuti ape iwo ongororo, maturusi, maitiro, uye tarenda kuti vanyatsoona mari yavo yeCRM.
Kutsanangura CRM Kubudirira
Yako CRM investimendi haizadzikiswe zvizere kudzamara wava neizvi zvinangwa zvitatu zvasangana:
Transparency -Wese nhengo yesangano rako inogona kuona chaiyo-nguva chiitiko mukati mekushambadzira kwako uye maitiro ekutengesa mukati meCRM yako kuti unzwisise kuti sangano riri kushanda sei kune zvinangwa zvaro zvekukura.
Actionability -Chikwata chako chekushambadzira nekutengesa ikozvino chine chiitiko chinoitwa uye zvinangwa zvakapihwa zvinovabatsira mukumhanyisa kushambadzira kwesangano rako uye kukura kwekutengesa kweramangwana… kwete chikamu chinotevera chete.
Kutendeseka -Nhengo dzese dzesangano rako Tenda mune data ravari kuwana uye Tenda kuti kudyara kwavo muCRM kunovabatsira mukati nenzira kwayo kuongorora, kuongorora, kuronga, kugadzirisa, uye kufanotaura kutengesa kwavo uye kushambadzira.
Imwe nyaya nekuitwa kweCRM ndeyekuti masangano ekutengesa anowanzo kuenderana netsika vachirova nhamba dzavo kwechikamu chimwe nechimwe kana kupera kwegore. Nekuda kweizvozvo, CRM inoshandurwa kuita yenguva pfupi yekutarisa nepo vatengi vavo 'kutenga matenderera angave akawanda-makore. Kuita hakuzi kungorova chikamu chemuripo unotevera, ndezvehutungamiriri kudzika tsika yekurera uye kuita izvo zvinogonesa kambani kukura iyo yekutengesa funnel kwemakore anotevera.
Haisi chimwe kana chimwe chechimwe chezvinangwa izvi… zvese zviri zvitatu zvinofanirwa kusangana sangano risati raona kudzoka kwaro pakudyara tekinoroji muCRM.
Kana kambani yako iri kutamira kuCRM kana kunetseka nekuziva kugona kweCRM yako yazvino, inzwa wakasununguka kubata kambani yangu, Highbridge, mukubatsira. Isu tine maitiro akapupurirwa, maturusi, uye timu yakagadzirira kubatsira chero saizi sangano. Takashanda kune akawanda CRM software suites uye tine ruzivo rwakasiyana muSalesforce Sales Cloud.
udza mashoko Highbridge
Kuzivisa: Ini ndiri mubatsiri uye mubatsiri mukati Highbridge.
Tags: pedyo kutengesaCRMcrm otomatikicrm cleanup consultantcrm consultantcrm dhatacrm data kuchenesacrm kuitacrm kusanganamutengi wehutano hwehukamahighbridgehubspotlead alamamarketing qualified leadmqlgore rekutengesakutengesa dashibhodhisales salesnelkutengesa funnel dashboardkutengesa funnel visualizationkutengesa kutungamiramukana wekutengesakutengesa kuitamaitiro ekutengesamutengesi anokwanisa kutungamirasalesforcevatengesi vekutengesa gore